Educmad : naneho fanandramana siantifika ny mpianatra | NewsMada
Nomena lanja ny mpianatra, omaly, amin’ny fampirantiana siantifika nomanin’izy ireo teny amin’ny lycée Rabearivelo Analakely. Niainga avy amin’ny lesona any an-dakilasy izy ireo nampiseho ny tranga siantifika miseho amin’ny fiainana andavanandro toy ny famoronana herinaratra avy amin’ny ovy. Sekoly mampihatra ny tetikasa Educmad no mandray anjara amin’ny fampirantiana siantifika ka nahitana ny lycée JJ Raberarivelo, lycée Ambohimanarina, lycée Saint François Xavier, Saint Antoine ary ny kolejy Rasalama.
Fitaovana tsotra hita eto amintsika no nampiasin’ny mpianatra nampisehoana ny fanandramana nomaniny (vinaingitra, voatabia, laisoa, vy, kapa, plastika…). 10 ny fanandramana sy fampirantiana azon’ny mpianatra notsidihana, omaly maraina. Hoezahina atao isan-taona ny fampirantiana siantifika hisarihana ny mpianatra hirona amin’ny taranja siantifika any am-pianarana, hoy ny mpiandraikitra ny tetikasa Educmad, Carine Roditis.
Manana antontan-kevitra voarakitra ao anaty ordinatera ny educmad ahitana lesona, fampiharana, laza adina ho an’ny fanadinam-panjakana nanomboka ny taona 1999 entina hanampy ny mpampianatra ny taranja Science de la vie et de la terre, fizika simia ary ny matematika. Tombony ho an’ny mpampianatra ny mampiasa azy satria tonga dia vonona raha tsy nahavita an’izany izy mialoha ny fampianarana. Manana toerana misy ordinatera avokoa ny sekoly 92 mampihatra ny educmad. Tsapa fa ambony kokoa ny fari-pahaizan’ny mpiadina amin’ny bakalorea nivoaka avy amin’ny sekoly manana mpampianatra mampiasa ny antontan-kevitra nomerika miaraka amin’ny educmad. Miofana isan-taona rahateo ny mpampianatra momba ny fampitana ny fahalalana manaraka ny fivoarana.